समानान्तर Samanantar: April 2010
बाँचुन्जेल कतिले उनलाई समस्या भने । मरेपछि एकाध जना खलनायक भन्ने पनि निस्के । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै गाली खाने नेता उनै हुन । तर, उनको अभावको अर्थ अब बुझ्न थालिएको छ । मुलुक मुठभेडमा जाँदैछ। बर्बाद हुन्छ भन्ने थाहा पाएरै पनि हठ छाड्न कोही तयार छैनन् । कम्तीमा सबैलाई बोलाएर एकै ठाउँमा राख्न अौला ठड्याएर सहमति, सहकार्य र एकताको विकल्प छैन भन्ने त सम्झाउँथे गिरिजाबाबुले । यसरी सबैले हठ गरिरहने हो भने मुलुक कम्बोडिया कि इन्डोनेसिया हुने जोखिम बढ्दो छ । गिरिजाबाबु थिए र गाली भने पनि गरेर चित्त बुझाउन पाइन्थ्यो । अब कस्लाई दोष दिने?
Posted by Govinda at 4/26/2010 06:47:00 AM No comments:
Labels: अब कस्लाई दोष दिने?
नेपाललाई भूपिले हल्लै हल्लाको देश भनेका छन् । यहाँ हल्ला बढी नै चल्छ । अहिले सुनिएका केही हल्लाः
१. काठमाडौं ल्याइने कार्यकर्ता राख्न परेकाले अखिल क्रान्तिकारीले नीजी विद्यालय बन्द गराएको हो ।
२. बैशाख १८ गते काठमाडौं आएपछि माओवादी कार्यकर्ता सत्ता कब्जा गरेरमात्रै फर्कने छन् ।
३. सिंहदरबार घेरेर प्रधानमन्त्रीलाई किर्गिज शैलीमा बर्खास्त गर्ने र सरकारको घोषणा गर्नेछन् । त्यो सरकारले भूमिसुधारलगायत केही चर्का क्रान्तिकारी (?) घोषणा गर्नेछ । माओवादीले ९महिनामा केही गरेन भन्ने मेटाउने रे ।
४. यसरी बनाएको सरकारलाई चीनले मान्यता दिन्छ रे । अनि अनमिनले सघाउँछ रे । भारतले कचकच गरे सन् १९५० को सन्धि खारेज गरिदिने रे ।
५. अरू मुलुकले मान्यता नदिए पनि चीन र राष्ट्रसंघको आड पाएपछि १५-२० वर्ष सजिलै माओवादी सरकार चल्छ रे ।
६. माओवादीले गर्न लागेको जनप्रदर्शनमा सरकारले बल प्रयोग गरे क्रान्तिकारी युवाले मुलुक नियन्त्रणमा लिने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेपछि हो कि तल्ला तहका कार्यकर्ताका कुरा सही हो कि क्या हो जस्तो लाग्न थालेको छ तर पत्याउन भने गाह्रै भएको छ।
Posted by Govinda at 4/26/2010 12:38:00 AM No comments:
लाजिम्पाटबाट सामाखुसी निस्कने बाटामा एउटा थुम्को छ । त्यसमा बन छ । थलीमा मन्दिर पनि छ । त्यसलाई रानीबारी भन्छन् । बिहान त्यहाँ जानेको संख्या ठूलै हुन्छ । त्यही बन पनि फोहोर बनाउँछन् बनभोज र सुटिङ गर्नेहरूले । रेखदेख गर्ने समिति छ । ९ बजेपछि बनभित्र पस्नै पैसा तिर्नुपर्छ तर फोहोरको भने तिनले खासै वास्ता गरेजस्तो लागेन । आइतबारको फोहोरका केही तस्बिर
Posted by Govinda at 4/19/2010 08:42:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 4/18/2010 12:35:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 4/11/2010 08:00:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 4/07/2010 04:08:00 PM No comments:
काठमाडौं सहरका मुख्य चोकमा पुग्दा झुक्किएर कतै भारतको उत्तर प्रदेशको कुनै सानो बजारको गल्लीमा पो पुगियो कि जस्तो लाग्छ । रामदेव, कृपालु जी महाराज र अर्का कुनै कथित स्वामीको पोस्टर टाँसिएको छ । हाम्रा नारायण पोख्रेलको त यस्तो धुम देखिएन । उनले सामाजिक विकासमा गरेको योगदानका तुलनामा यिनको कुनै हैसियत त छैन । किन नेपाली यति मूर्ख र भावुक भएका हुन् ? के हुन लागेको हो नेपाली नेता र अगुवालाई?
Posted by Govinda at 4/03/2010 09:49:00 PM No comments:
Labels: हामी कता?
१. योग प्रशिक्षक रामदेवलाई दिइएको महत्त्व जनतालाई रूचेको छैन भन्ने ज्ञान हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका ठूलाठालुलाई छ कि छैन होला?
२. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शव यात्रा र आज शनिबार कांग्रेसले आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली सभामा उपस्थिति हेर्दा सूर्य र बालुवाको दृष्टान्त सम्झना भयो । घाम लागुन्जेल बालुवा झन् तातो हुन्छ तर अस्ताउनेबित्तिकै चिसिन्छ । कांग्रेसको तेज कोइरालै हुन् क्यारे ! कि नेताको अस्तु नसेलाउँदै कुर्सीका भएको घीनलाग्दो हानथापले जनता वाक्क भएका होलान् ?
Posted by Govinda at 4/03/2010 01:58:00 PM No comments:
Labels: देखेका कुरा
गिरिजाबाबुको निधनपछि थालिएको उहाँको गुनगान अब मत्थर हुन थालेको छ । उहाँको व्यक्तित्त्वका
विविध पक्ष उजागर भयो । मैले उहाँको निकट भएर काम गर्ने खासै मौका पाइन । तैपनि उहाँको
व्यक्तित्त्वका केही पाटाहरू उजागर गर्ने घटना सम्झनामा छन् । त्यस्ता घटना बिस्तारै लेख्दै जाने जमर्को गर्नेछु । तिनलाइ समानान्तरमा पोस्ट गर्नेछु ।
पोखराबाट फर्कँदा नेतात्रयसँग खैरेनीमा ।
कसैलाइ छाप्न, रेडियोमा प्रसार गर्न मन लागे गरे हुन्छ । स्रोत खुलाए आभारी हुनेछु, नखोले पनि कसैमाथि मुद्दा हाल्ने छैन ।
पत्रकारितालाइ पेसा बनाउनुपूर्व म सरकारी कर्मचारी र त्यसभन्दा पहिले राजनीतिक कार्यकर्ता थिएँ ।
पत्रकारका रूपमा उहाँलाइ गाली नगर्ने थोरै जनामा पर्थेँ । पद छाड्न र सुजातालाइ काखी नच्याप्ने
आग्रह उहाँलाइ मन नपरेको प्रसंग पनि हुनसक्छ । जेहोस्, मलाइ गिरिजाबाबुलाइ बुझ्नसक्छु भन्ने
भ्रम थियो । उहाँले मैले देखेको मन पराएको पनि थाहा पाएको थिएँ । यसको पृष्ठभूमि निकै पुरानो छ
सत्याग्रह (२०४२) पछि नेपाली कांग्रेसले पोखरामा भेला गरेको गरेको थियो । देशभरका नेता
कार्यकर्ता भेला भएका थिए । म त्यति बेला तनहुँ जिल्ला पञ्चायतको उपसभापति थिएँ । कांग्रेसले
आधिकारिकरूपमा पञ्चायतको चुनाव लड्ने निर्णय नगरे पनि तनहुँमा पार्टीकै तर्फबाट निर्वाचन
लडाइएको थियो । सभापतिसहित ११ मध्ये ७ स्थानमा कांग्रेसका उमेदवार निर्वाचित भएका थिए ।
मलाइ चुनाव लड्ने खासै मन थिएन तर जिल्लाका नेताहरूको दबाब र गाउँका साथीहरूको सल्लाहबाट
स्वीकार गरेको थिएँ । मेरो गाउँमा मबाहेक कांग्रेसकै अर्को मान्छेले चुनाव जित्ने अवस्था पनि सायद
थिएन । यस्तै जिल्लाव्यापी परिचय बनाएको अर्को व्यक्तित्त्व पनि थिएन । पहिले प्रधानपञ्च अनि
उपसभापतिको चुनाव जितेँ । उपसभापति भएपछि राजनीति अलि बढी नै तीतो हुँदै गएको थियो ।
राजनीतिमा चाहिले छलछाम नभएकाले पनि होला मन रमाउन सकेको थिएन । तर, काममा
सकेसम्म इमानदार हुने प्रयास गर्थेँ । यसैले कम्युनिस्ट र पञ्चहरूले पनि रूचाउन थालेका थिए ।
तर, कांग्रेसिभत्रै रिस गर्नेको संख्या थपिँदै गएको थियो । पञ्चायतमा बढ्दै गएको असहिष्णु
व्यवहारले वाक्क लागिसकेको थियो । त्यसैले मैले पञ्चायत रजत जयन्तीका अवसरमा पुस १,
२०४२मा दमौलीमा आयोजित कार्यक्रममा घोषणा गरेको थिएँ - अब पञ्चायतमा कुनै चुनाव लड्दिन
। त्यसपछि पोखरा भेला भएको थियो । मैले पोखरा भेलामा यही मनस्थितिमा भाग लिएको थिएँ ।
भेलामा मैले बोल्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको सल्लाह थियो । मौका पाएँ पनि । मैले पार्टीले विकास
निर्माण समर्थकहरूको संरक्षणका लागि स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ तर मचाहिँ अब बिदा
लिन्छु भने । साथै पञ्चायतका पद र अवसरलाइ पार्टी संगठनका लागि भने प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यो
कम्युनिस्टहरूको शैली हो । हामीले राजनीतिक पहिचान कायमै राख्नुपर्छ तर कम्युनिस्टजस्तो
भूमिगतरूपमा पञ्चायतका पद र अवसरको अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता थियो
। चुनावमा भाग लिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा पुष्टि गर्ने तर्कमा भने - राजनीतिक परिवर्तनका लागि
पार्टीबाटै आन्दोलन गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो विश्वासमा जनमत संग्रहमा बहुदललाइ मत दिएका कार्यकर्ता
र समर्थक मतदातालाइ पञ्चहरूको प्रतिशोधबाट बचाउन हामीले केही साथीलाइ पञ्चायतमा पठाउनै
पर्छ । नत्र पार्टीलाइ जनताले विश्वास गर्न छाड्नेछन् । भेलाका सहभागीले लामो ताली बजाएर मेरो
विचारको समर्थन गरे । ती शिक्षक थिए सायद ।
किसुनजी, गणेशमानजी र गिरिजाबाबुलगायत नेताहरूले पनि ध्यान दिएर सुनेजस्तो लाग्यो ।
गणेशमानजीले आफ्नै शैलीमा भन्नुभयो - के कुरा गरेको होला? पार्टीले चुनाव लड्नुपर्छ रे अनि म
चाहिँ लड्दिन रे ! मैले त केही बुझिन । म अलमल्ल परेँ । स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हो कि भनेर माइक
नजिकै अलमलिएकै बेला किसुनजीले भन्नुभयो - ल ल मैले बुझेको छु । अहिले जानुस् । म
मञ्चबाट फर्कँदै गर्दा गिरिजाबाबुले भन्नुभयो - मलाइ भेट्नुस् ।
पोखराबाट उहाँहरू फर्कँदा दमौली पस्नुभयो । त्यहाँबाट खैरेनीसँग म पनि उहाँकै जिपमा आएँ ।
बाटामा उहाँहरू चितवन जाने थाहा भयो । मलाइ पनि त्यही दिन जन्त जानु थियो गैंडाकोटसम्म ।
म जन्तीसँगै गएँ । साँझपख भरतपुरमा उहाँहरू बसेको होटलमा पुगेँ । गिरिजाबाबुले बोलाउनु भयो ।
र मलाइ बिना भूमिका भन्नुभयो - राजनीति नछाड्नुस् । काठमाडौं आउँदा मलाई भेट्नुस् । मैले
राजनीति छाड्ने आफ्नो निर्णय स्पष्ट पार्न खोज्दै तनहुँमा पढेलेखेका नेता कांग्रेसमा छँदैछन् नि भनेर
नाम लिएँ । उहाँले भन्नुभयो - ती प्यारासाइट हुन् । तिनको नामै नलिनुस् । म अवाक् भएँ । उहाँले
कुराकानी टुंग्याउँदै आदेश दिनुभयो - राजनीति छाड्ने हैन । काठमाडौं आएर मलाई भेट्नुस् । मैले
राजनीति छाड्ने अठोट गरिसकेकै थिएँ । तर, उहाँको तत्काल प्रतिवाद गरिन हाँसेर टारेँ ।
पछि काठमाडौं आउँदा पनि उहाँलाई एक्लै भेटिन । जनआन्दोलन भयो । त्यसपछिका भेटमा मैले
कहिल्यै त्यो प्रसंग उठाइन । उहाँले पनि बिर्सनु भयो होला । मलाई राजनीति गर्ने आदेश दिनु भएन
गिरिजाबाबुले मलाई किन राजनीति नछाड्न भन्नु भयो होला भन्ने अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन ।
Posted by Govinda at 4/02/2010 12:59:00 PM No comments:
Labels: नमानेको आदेश
व्यक्तित्त्वका केही पाटाहरू उजागर गर्ने घटना सम्झनामा छन् । त्यस्ता ङटना बिस्तारै लेख्दै जाने
जमर्को गर्नेछु । तिनलाइ समानान्तरमा पोस्ट गर्नेछु । कसैलाइ छाप्न, रेडियोमा प्रसार गर्न मन लागे
गरे हुन्छ । स्रोत खुलाए आभारी हुनेछु, नखोले पनि कसैमाथि मुद्दा हाल्ने छैन ।